Banyere Anyị - KEYLASER GROUP LTD
Beijing KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2007, onye na-emepụta ngwaọrụ ahụike zuru ụwa ọnụ na-emepụta ngwaahịa dị elu maka ndị dọkịta na-awa plastik, ndị dọkịta na-ahụ maka anụ ahụ, ndị dọkịta na ndị ọkachamara ahụike.
Ogo bụ omenala anyị.
KEYLASER mepụtara ngwaahịa na-aga n'ihu na-eduga n'ahịa zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ndị si mba ofesi na-ere ahịa ngwaahịa.
KEYLASER na-arụkọ ọrụ na ndị mmekọ nkesa zuru ụwa ọnụ iji nye afọ ojuju ndị ahịa kacha elu.
Na dị iche iche a pụrụ ịdabere na ngwaahịa ahịrị gụnyere IPL, E-ìhè, SHR, Diode laser, Multi-channel RF, RF microneedle, CO2, Diode laser, na Q-Switch laser, KEYLASER na-eje ozi ụlọ ọrụ dị ka otu n'ime ndị na-eduga ụlọ ọrụ na rigorous R & D larịị. na ahụmahụ bara uru.
Na-agakwa ọtụtụ ihe ngosi kwa afọ, iji mee ka ika anyị mara amara n'ụwa niile
Ndị otu R&D anyị nwere ikike nwere ike iji ya mepụta ngwaahịa ọkaibe na enyi.OEM, ODM, onye nnọchi anya ọwa, onye nkesa, ma ọ bụ ụdị nkwado ndị ọzọ.Anyị enweela ọtụtụ ahụmahụ na-aga nke ọma ma nwee ọchịchọ siri ike ịzụlite mmekọrịta azụmahịa gị na gị maka uru otu na ọganihu.
Anyị na-emepụta ụdị ọdịdị ọhụrụ na ngwanrọ ọhụrụ maka igwe ịma mma dị iche iche.Ngalaba R&D anyị na ndị mmekọ mba ụwa na-arụkọ ọrụ
Ụlọ ọrụ anyị etoola otu ụzọ n'ụzọ atọ.
A na-ekewa ụlọ ọrụ ahụ na ngalaba dị iche iche, nke ọ bụla nwere onye nduzi nke ya.The Marketing na Sales ngalaba mejupụtara ahịa otu, na ndị ahịa ọrụ.Ngalaba nchịkwa gụnyekwara ọrụ mmadụ.
Anyị bụ ndị isi ahịa na mba atọ. Anyị agbasawanyela ọrụ anyị n'ụwa niile karịa mba 180
N'afọ 2020, anyị nwere ihe karịrị otu ndị nkesa na mba ụfọdụ,
Anyị na ụlọ ọrụ anyị n'ụwa niile na-arụkọ ọrụ.
Tọrọ ntọala na 2007
Ọkachamara na teknụzụ